Xiaomi Mi7ကိုယခုလ၂၃ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်တော့မှာလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Xiaomi Mi7ကိုယခုလ၂၃ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်တော့မှာလား ?
Xiaomi စမတ်ဖုန်းသစ် Mi7ကိုမိတ်ဆက်မယ့် တရားဝင်ကြော်ငြာပိုစတာလို့ ထင်ရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဒီနေ့မှာတော့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တရားဝင်လို့တော့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ အဆိုပါ ပိုစတာမှာ လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမယ့် Mi Logo နဲ့အတူ အရောင်တွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ 7(severn) ပုံစံနဲ့ မေ၂၃ဆိုတဲ့ ရက်စွဲပါရှိလာပါတယ်။ ပိုစတာရဲ့အရည်အသွေးဟာ မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးပုံစံ မရှိတဲ့အပြင် Xiaomi ရဲ့တရားဝင် Weibo အကောင့်ကနေလည်း တင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြား Weibo acc တစ်ခုမှာတင်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီအချက်အလက်ကိုယုံကြည်လို့တော့ မရသေးပါဘူး။ သို့ပေမယ့် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလလောက်က Xiaomi Mi6ဆိုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ဘူးတာကြောင့် ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေတော့ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီနေ့အထိ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအရ သူ့မှာ Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားမယ်လို့ Benchmark အမှတ်များအရ သိရပါတယ်။ မျက်နှာပြင် 5.65-Inch Display ကိုသုံးထားပြီး အရည်အသွေးမှာ Full HD+ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အချိုးမှာ 18:9 ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Specs တွေ Feature တွေကတော့ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်၊ Android Oreo (Miui Skin) Storage 64GB/ 128GB/ 256GB စတာတွေပါ။ Ram 6GB သို့မဟုတ် 8GB ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Xiaomi က Mi7အပြင် Mi7Plus ကိုလည်း မိတ်ဆက်မယ်လို့ နောက်ဆုံး သတင်းများအရ သိရပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၀၁ လက်မ Full HD+ Display ပါမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်နှုာပြင် အချိုးဟာ 18:9 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Mi7Plus မှာ Always-On Display Feature နဲ့အတူ OLED Display ကိုသုံးထားမယ်လို့သိရပါတယ်။
Weibo မှာတော့ Xiaomi ရဲ့တည်ထောင်သူ Lei Jun ကိုယ်တိုင်က In-Display Fingerprint Scanner ပါမယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒ်ီပိုစတာဟာ တရားဝင်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် Mi7မဟုတ်ပဲ အခြားစမတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသေးတယ်။ မေ၂၃မှာ Mi7အမှန်တကယ်ထွက်လားမလားဆိုတာကိုတော့ ၁၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်း တရုတ်လူမှုကွန်ရက် Weibo မှာတက်လာမယ့် အချက်အလက်တွေကို စောင်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ Mi 7တကယ်သာ ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Xiaomi သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာနောက်ထပ် high-end ဖုန်းတစ်လုံးထပ်တိုးလာပါတော့မယ်။
Xiaomi စမတျဖုနျးသဈ Mi7ကိုမိတျဆကျမယျ့ တရားဝငျကွျောငွာပိုစတာလို့ ထငျရတဲ့ပုံရိပျတဈခုဒီနမှေ့ာတော့ ထှကျပျေါလာပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ တရားဝငျလို့တော့ မသတျမှတျနိုငျပါဘူး။ အဆိုပါ ပိုစတာမှာ လုံလောကျတဲ့အခကျြအလကျတှေ ဖျောပွထားခွငျးမရှိပမေယျ့ Mi Logo နဲ့အတူ အရောငျတှလေောငျကြှမျးနတေဲ့ 7(severn) ပုံစံနဲ့ မေ၂၃ဆိုတဲ့ ရကျစှဲပါရှိလာပါတယျ။ ပိုစတာရဲ့အရညျအသှေးဟာ မွငျ့မားတဲ့အရညျအသှေးပုံစံ မရှိတဲ့အပွငျ Xiaomi ရဲ့တရားဝငျ Weibo အကောငျ့ကနလေညျး တငျထားတာမဟုတျပါဘူး။ အခွား Weibo acc တဈခုမှာတငျထားတာကိုတှခေဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဒီအခကျြအလကျကိုယုံကွညျလို့တော့ မရသေးပါဘူး။ သို့ပမေယျ့ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူ Xiaomi ဟာပွီးခဲ့တဲ့နှဈဧပွီလလောကျက Xiaomi Mi6ဆိုကိုမိတျဆကျခဲ့ဘူးတာကွောငျ့ ဒါဟာဖွဈနိုငျခွတေော့ ရှိပါသေးတယျ။
ဒီနအေ့ထိ ပေါကျကွားထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ သူ့မှာ Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆကျဆာထညျ့သှငျးထားမယျလို့ Benchmark အမှတျမြားအရ သိရပါတယျ။ မကျြနှာပွငျ 5.65-Inch Display ကိုသုံးထားပွီး အရညျအသှေးမှာ Full HD+ ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအခြိုးမှာ 18:9 ဖွဈပါတယျ။ တခွား Specs တှေ Feature တှကေတော့ ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈ၊ Android Oreo (Miui Skin) Storage 64GB/ 128GB/ 256GB စတာတှပေါ။ Ram 6GB သို့မဟုတျ 8GB ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Xiaomi က Mi7အပွငျ Mi7Plus ကိုလညျး မိတျဆကျမယျလို့ နောကျဆုံး သတငျးမြားအရ သိရပါတယျ။ သူ့မှာ ၆.၀၁ လကျမ Full HD+ Display ပါမှာ ဖွဈပွီး မကျြနှုာပွငျ အခြိုးဟာ 18:9 ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Mi7Plus မှာ Always-On Display Feature နဲ့အတူ OLED Display ကိုသုံးထားမယျလို့သိရပါတယျ။
Weibo မှာတော့ Xiaomi ရဲ့တညျထောငျသူ Lei Jun ကိုယျတိုငျက In-Display Fingerprint Scanner ပါမယျလို့ အတညျပွုခဲ့ပွီးသားပါ။ ဒျီပိုစတာဟာ တရားဝငျလို့ မသတျမှတျနိုငျသေးတဲ့အတှကျ Mi7မဟုတျပဲ အခွားစမတျဖုနျးလညျး ဖွဈနိုငျခွရှေိပါသေးတယျ။ မေ၂၃မှာ Mi7အမှနျတကယျထှကျလားမလားဆိုတာကိုတော့ ၁၀ရကျနနေ့ောကျပိုငျး တရုတျလူမှုကှနျရကျ Weibo မှာတကျလာမယျ့ အခကျြအလကျတှကေို စောငျကွညျ့ရပါလိမျ့မယျ။ Mi 7တကယျသာ ထှကျလာမယျဆိုရငျတော့ Xiaomi သုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ ရှေးခယျြစရာနောကျထပျ high-end ဖုနျးတဈလုံးထပျတိုးလာပါတော့မယျ။
Previous articleSTYLUS ပါဝင်မယ့် LG ‘Q NOTE’ ရဲ့မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်ထွက်ပေါ်
Next articleDual ကင်မရာ၊သတ္တူကိုယ်ထည်နဲ့ တန်ဘိုးနည်း Cool2ဖုန်း